Nitendry C Cable
Shenzhen BoRun Electronics Co., LTD dia Manufacturer ny USB C Hub, USB C CABLE, Wireless dovia nanomboka tamin'ny 2013, mafy RD fahaizany, nitarika famatsiana fitaovana, in-trano orinasa toerana manampy antsika mba hanolotra mpiara-miasa OEM & OBM & ODM fanompoana amin'ny fiheverana MOQ sy tia mifaninana Price.
Raha tokony ampahany hivarotra ny vokatra ao an-barotra eto dia manana ny orinasa hamokatra ny vokatra, ny fitantanana tsara, raha mbola namboarina mila vokatra sasany no mahita injeniera ho anao. koa ahoana no andrenesantsika ny hevitra sy mizara ny soso-kevitra ny hiara-miasa. Noho ny injeniera, orinasa mpamokatra entana, fitsirihana fahaiza-manao izay manohana antsika ho iray-mijanona mpamatsy vahaolana amin'ny avo malaza ao an-barotra.
Ny Lucia, izay nahazo diplaoma avy any Shenzhen University amin'ny diplaoman'ny Marketing, nanomboka tamin'ny 2014 rehefa niaraka Macverin, ary nahafinaritra ny fiarahana miasa sy ny fiainana miaraka amin'ny mpiara-miasa, ary indrindra tompon'andraikitra marika trano sy ny fisondrotana. Tokony ilainao barotra misy famakafakana na Fampahalalana mikasika miteny amiko.
Ny Eunice, izay nahazo diplaoma avy any Shenzhen University amin'ny diplaoman'ny Fandraharahàna, Tiako anglisy sy mandalina samy hafa kolontsaina teny-sakany, hatramin'ny 2013 aho niaraka Macverin I nanana matihanina fahaiza-manao sy ny hahafantatra ny fomba hanolotra tsara indrindra hanampy-soatoavina ho an'ny mpanjifa, Izaho ho eto miaraka amin'ny ekipa, mba hanaterany 24 * 7 Instant fanompoana.
Tsy i Paoly no nahazo diplaoma avy any Hunan Engineering Teknolojia oniversite amin'ny fitaovana elektronika, dia nandany ny fananany rehetra ny fotoana hianarana Apple vokatra sy ny fironana, satria izaho dia faran'izay mpankafy, fony aho miasa ao Macverin foana aho no hevi-baovao hevitra vaovao vokatra, mila more tsy hanahirana ho an'ny mpampiasa farany, satria fantatro ny faniriana.
Ny Gavin izay miasa ho toy ny mpamorona ny Macverin, Tiako ny fanaovana sary, mozika sy ny famolavolana, izao tontolo izao dia tena tsara ary manaraka ny foko mba tast ny fotoana, handravaka ny zavatra rehetra miaraka amin'ny tanana sy ny saina, tao Macverin dia manolotra anareo tsy ho andevo fonosana sy ny varotra fitaovana famolavolana amin'ny fiheverana MOQ, Izaho no faha-3 tanana toy ny nomaniny ho solon'izay.
NY ADD- VALUE SERVICE
Manana modely ny ny plastika sy ny faritra fanaovana tsindrona orinasa .this hanafainganana ny ODM fotoana fanaterana ny mpiara-miasa.
Rich za-draharaha sy ny sampan-draharaha RD varotra ny vokatra mpitantana manampy antsika mba hanolotra tsy manam-paharoa patented famolavolana ny tolo-kevitra ho an'ny mpiara-miasa.
Original in-trano orinasa mpamokatra entana, dia mahatonga antsika fahafahana manolotra tolo-kevitra avo lenta ho an'ny mpiara-miasa.
100% ny kalitaon'ny maso alohan'ny fanaterana sy ny tsininy tahan'ny latsaky ny 0.3%.
24 tamin'ny 7 tena mialoha ny fotoana taorian'ny asa fanompoana varotra ho azo antoka avy hatrany no mahazo tamberina.
Electronics Co. Shenzhen BoRun LTD
FREE QUOTE tsy misy adidy. masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.